लहैलहैमा शेयर बजारमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ ? जोखिममा पर्नुहोला नी ! – नेपाल टेलिभिजन
गृह पृष्ठ/अर्थ/लहैलहैमा शेयर बजारमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ ? जोखिममा पर्नुहोला नी !
नेपाल टेलिभिजन २५ जेष्ठ २०७८, १९:४३
काठमाडौँ (रासस)- के तपाई अरुले भनेको भरमा लहैलहैमा लागेर शेयर बजारमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ ? नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा कारोवार मापक नेप्से परिसूचक उच्च अङ्कमा पुगेको बेला राम्रो फाइदा हुन्छ भनेर कुनै पनि कुरा नै नबुझी हाम फाल्नु भएको छ ? यदि छ भने तपाईले कमाउने होइन, लगानी गरेको रकम समेत गुमाउन सक्नुहुन्छ ।
आज नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्दै अधिकांश स्थानीय तह
बेलायतमा भिसी तुलबहादुर पुनको नाम अङ्कित रेल सञ्चालनमा